Ugg amabhuzu uvele Russia eminyakeni embalwa edlule, naphezu ukubukeka kwayo exakile, othanda kakhulu abantu bakithi.
Thina yasungulwa lezi amabhuzu e-Australia ekhulwini le-19. Ayefaka kubo abasebenzi ekuqaleni wezolimo. izicathulo Unprepossessing ngokuthi «amabhuzu ugly» ( «amabhuzu ugly"), kamuva igama lancipha laconic «uggs». Ekuqaleni kwekhulu lama-20, amabhuzu eyenziwe ngesikhumba semvu aviators esikhethiwe: abanikeze asebenza nabo ngaleso sikhathi ivulekile, ngakho abashayeli bezindiza kufanele sekuqala ukufudumala kahle.
Fashion Ugg Boots yayimane nje ekuqaleni kwaleli khulu leminyaka. Baqale alalelwa izakhamuzi European. brand elihle Abaningi baqala ukuba ake amabhuzu Australian, umklami enzé lesi fantasy izicathulo ekhangayo.
ukubukeka lemukelekako Yiqiniso, ufeza indima ebalulekile, kodwa Inzuzo enkulu yalo izicathulo namanje omuhle kakhulu ukuzinza ezishisayo. Ngaphezu kwalokho, Ugg Boots Kulula kakhulu futhi evumelana. Ngenxa ngokucubungula ekhethekile yezimvu uvolo, okuthathwe kuso la amabhuzu kwenziwa kuzo efudumele ebusika futhi epholile ehlobo. It is lokhu isici esiyingqayizivele ikuvumela ukuba ukugqoka Ugg Boots ngasiphi isikhathi sonyaka.
Izicathulo kusuka Australia namanje eseyintsha, ngakho akuvamile ozinikezele kuphakama umbuzo, sizogqokani nge Ugg Boots. Eqinisweni, iyiqoqo kanye amabhuzu ezinjalo kumele zithathwe nge isabelo kwelizinga umthwalo, njengoba ngisho amaphutha amancane kungayandisa kakhulu ukuba zimbi kakhulu ukubukeka.
Kusukela sizogqokani Ugg Boots ebusika
Semvu amabhuzu wenza ukulingana kahle yezemidlalo kanye emgwaqweni isitayela. Ngakho, noma ukuhamba nabangani bakho, ungakwazi agqoke ijezi efudumele, tapering jeans jacket ku fluff futhi Ugg Boots. A kwalokho enhle kule khithi uzobe wathungela izesekeli.
Futhi, Ugg Boots akukubi elihlangene ne iDemo semvu amajazi noboya jackets nemfashini njengamanje. Phelelisa umfanekiso leggings, abakhethiwe ngombala owodwa nge izicathulo. Lokhu iphakethe kungaba uggi zakudala, isibonelo, wathungela noma ehlotshiswe paillettes ezimibalabala, embroideries noma izicelo.
Kusukela sizogqokani Ugg Boots e ekwindla kanye entwasahlobo
Esikhathini offseason, kutuswa ukuba sihlanganise amabhuzu Ugg nge sweaters efudumele futhi ibhulukwe, Skinny. Wayemude emncane ngomzimba futhi abesifazane mncane kungaba uzizamele izingubo. Kungcono makudle emajezi obukhulu.
Kusukela sizogqokani Ugg amabhuzu ehlobo
Nethezeka emaphandleni, kwi cool kusihlwa ehlobo noma ekuseni kakhulu, ungakwazi ukugqoka ngubo emabhuzwini Australian, sweaters ethokomele, iziketi kanye tights insimbi-obukhulu. Kuyinto efiselekayo ukuthi bawaphendule kwaba ezinombala ofanayo.
Kusukela sizogqokani Ugg Boots ekhaya
abandayo kusihlwa ebusika On, amanye amamodeli amabhuzu eyenziwe ngesikhumba semvu ingasetshenziswa njengoba indlu izicathulo. Kungcono ukuhlanganisa nabo Ivy ezemidlalo isudi noma jeans ozithandayo kanye izikibha.
Indlela yokwenza siqu izandla Ugg your boots
Kunezindlela eziningana wokwenza boots ezinjalo. The elula - ukubenza aphume izinto ezindala. Lokhu kuzodinga amathe Slippers kanye ijezi wathungela obukhulu. Kusukela yokugcina ukusika imikhono ukunamathisela ukuba ematheni, ukuze cuff kwaba phezu (emlenzeni). Ngaphezu Shanks kungaba thunga noboya noma indwangu, ehlotshiswe ubuhlalu futhi efekethisiwe.
Okuningi okunekhono inaliti abesifazane bayamenywa ukuba uxhumane Ugg zabo amabhuzu. Luphinde zidinga ematheni, okuyilona elidingekayo ukuze tie hook ukuze bathole i Slippers zasendlini ke ukuxhumanisa ke engagunyaziwe.
Enye samuntu - ukwenza uggi kusukela amajazi ubudala. Njengoba isibonelo esingazithatha imuphi usayizi amabhuzu efanelekayo, susa nabo ukuze uthumele izilinganiso indaba. Sole imikhiqizo enjalo kungaba kwenziwe okufanayo njengoba ezinye izingxenye nezicathulo. Ukuze uhamba endleleni, efana Ugg ezenziwe ekhaya neze kahle, kodwa njengoba emzini nezicathulo kungafaneleka.